जुत्ताचप्पल किन्नुभो ? भृकुटीमण्डपमा चलिरहेछ जुत्ताचप्पलको अहिलेसम्मकै ठूलो मेला – samyantra.com
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र ०६, २०७४ समय: ७:२७:४७
काठमाडौं/ तपाईंले यस बर्षका लागि जुत्ताचप्पल किन्नु भयो ? तपाईंलाई भारी छुटमा जुत्ताचप्पल किन्ने अबसर आएको छ । राजधानीको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ जुत्ता चप्पलको अहिलेसम्म्कै ठूलो मेला ।
नेपालका चर्चित २३ वटा ब्राण्डहरुको सहभागीतामा सुरु भएको यस मेलामा ब्यवसायीले भारी छुटमा जुत्ताचप्पल उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।
मेला अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो पनि हो । केही ब्यवासयी मिलेर यस्ता मेला गर्दै आएकामा फुटवेयर मेनुफ्याक्चर एसोसिएसनले नेपाली जुत्ताघरसँग मिलेर यस मेलामा अधिकांश जुत्ताचप्पल उत्पादकलाई एउटै छानामुनि समेटेको छ । मेलामा नेपालका अधिकांश चर्चित ब्राण्डाका जुत्ताचप्पल विक्रीमा छन् ।
मेलामा शिखर, रन, हाइलाइफ, विएफडियर हिल, क्रस रोड, केडी सुज, रोयल, स्काइ, मकालु, सुल्याण्ड, कोशेली, ल्याण्डवाक, जुम स्टाइल, फस्ट वाक, वोस, ह्याप्पी, टाकुरा, फिटराइट, लि बर्डलगायत २३ वटा ब्राण्डका जुत्ताचप्पल उपलब्ध छन् । स्वदेशी जुत्ताचप्पलका सेल मेला बेलाबेलामा हुने गरे पनि यति धेरै ब्राण्ड एकै ठाउँमा सहभागी भएको मेला राजधानीमा पहिलो भएको आयोजक नेपाली जुत्ताघरका अध्यक्ष होमनाथ उपाध्यायको दावी छ ।
मेलामा महिलाका लागि समेत दर्जनौ भेराइटीका जुत्ताचप्पल उपलब्ध छन् । चप्पलको सिजन सुरु भएकाले दर्जनौ मोडलका चप्पल मेलामै लन्च गरिएको छ, प्रसाईंले भन्नु भयो । मेलामा आफ्नो आवश्यकताअनुसार जुत्ताचप्पल छानेर लिन पाउने अबसर छ ।
यहाँ ३ हजारभन्दा बढी मोडलका जुत्ताचप्पल रहेको रन सुजका प्रबन्ध निर्देशक रुद्र न्यौपानेले जानकारी दिनु भयो । मेला विहान ७ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म भइरहेको आयोजकले जनाएको छ ।
प्रदर्शनीमा स्वदेशी छाला जुत्ताका साथै छालाका विभिन्न वस्तु उत्पादकको समेत सहभागीता छ ।मेला यो महिनाभर चल्नेछ ।
9,490 total views,4views today